दर्शकको साथ खोज्दै साली-भेना ! | Sagarmatha TVSagarmatha TV दर्शकको साथ खोज्दै साली-भेना ! | Sagarmatha TV
दर्शकको साथ खोज्दै साली-भेना !
काठमाडौं । फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत गत शुक्रबारबाट मुलुकभरका विभिन्न हलमा प्रदर्शनमा आएको ‘साली कस्को भेनाको’ चलचित्रले प्रदर्शनको पहिलो दिने दर्शकको औसत साथ पाएको छ । प्रदर्शनको पहिलो दिनभन्दा दोस्रो दिन अर्थात शनिबार हलमा केही बढी दर्शकले चलचित्र हेरे ।
त्यसो त चलचित्रको अवतरण सहज भने छैन । गत साताबाट प्रदर्शनमा आएका दुई चलचित्र रामकहानी र रोजले पनि दर्शको साथ पाइरहेका बेला यो चलचित्रले दर्शक साथ खोजिरहेको छ । हालै चलचित्रले प्रिमियर शो आयोजना गरेको थियो । चलचित्र हेर्न चलचित्रकर्मी र चलचित्र पत्रकाहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । चलचित्र हेर्न अधिकांशले चलचित्र राम्रो बनेको भन्दै निर्माण पक्षलाई सफलताको शुभकामना दिए । अहिले चलचित्र हेरेका अधिकांश दर्शकले चलचित्र राम्रो बनेको प्रतिक्रिया दिएसँगै निर्माण पक्ष सन्तुष्ट देखिएको छ ।
कमेडी जनराको यस चलचित्रलाई प्रिमियरमा राम्रो प्रतिक्रिया आएपछि निर्देशक भद्र भुजेलले दर्शकलाई राम्रैसँग हँसाउन सक्ने विश्वास गरेका छन् । मानवीय संवेदनामाथि निर्माण भएको चलचित्र पूर्ण रुपमा पारिवारिक कमेडी कथामा निर्माण गरिएको छ । मगर जातिको संकृतिमा साली र भेनाको सम्बन्धलाई चलचित्रमा देखाइएको निर्माण पक्षले जनाएको छ ।
चलचित्रमा विल्सन विक्रम राई, सुष्मा कार्की, मरिष्का पोख्रेल, रजनी गुरुङ, बुद्धि तामाङ (हैट),देब सागर बि.सी, रबि गिरी, बिरेन श्रेष्ठ, प्रिया रिजाल, जयनन्द लामा, पुष्प आचार्य,कविता आले, मिन घलान लगायतको अभिनय रहेको छ । देब सागर बि.सी यो चलचिबाट रजतपटमा डेब्यू गर्दैछन् । चलचित्रलाई भद्र भुजेलले निर्देशक गरेका हुन् । मुभिङ पिक्चर्स प्रा.लिद्वारा निर्मीत चलचित्र ‘साली कस्को भेनाको’ प्रसाद श्रेष्ठको प्रस्तुतीमा राम प्रसाद श्रेष्ठ, सुशील गोपाल न्याछ्यो, काजी मन श्रेष्ठ ‘बिशाल’, कमला भट्टराई र मुक्ति अधिकारीको मिलेर निर्माण गरेका हुन् ।